रणनीति - अनलाइन
पूर्व-सभ्यता: पत्थर उमेर
सिर्जना र प्रथम मानव-प्राइमेट्स तपाईंको आफ्नै कुलको नेतृत्व प्राचीन मिश्र र मेसोपोटामिया को पहिलो सभ्यताहरू गर्न4लाख वर्ष पहिले बस्थे। पूर्ण शहरमा आफ्नो आदिम encampment विकास गर्ने। तपाईं जनसंख्या वृद्धि, आफ्नो कार्यकर्ता, अनुसन्धान techn व्यवस्थापन
khazyle - तत्व को उतेजना
तपाईं Hedora रूपमा प्ले; त्यो Khazyle को मुलुकमा सुरक्षा रूपमा, मास्टर आर्चर। आगमन orcs, trolls, को undead, र पनि ड्रेगन बन्द रोक्नु गर्न हतियार आफ्नो शस्त्रागार प्रयोग र तत्व हेरफेर।
रोम को सडक
रोमान्टिक प्रेम कथा, बुद्धिमान् र धूर्त सिजरले सेट चुनौतीहरू, जंगली जंगल, प्रसिद्धि र सफलता संग असभ्य मुलुकमा तपाईं को लागि, प्रतीक्षा गर्दै छन् खेलाडी को विजेता! , आदिवासीहरूले गर्न रोमन आत्मा र संस्कृति ल्याउन सडक निर्माण र तपाईं औं हो भनेर प्रमाणित
रिक वर्ष अब त्यहि कम्पनी को लागि काम गर्दछ र आफ्नो मुर्ख सह-कार्यकर्ता डेव सहन गर्न छ। हरेक दिन डेव रिक जीवन एक डरलाग्दो सपना बनाउँछ! तर रिक पर्याप्त थियो! आज आईटी मान्छे को वृद्धि छ!
ओबामा Narnia खेल
ओबामा यो खेल मा सबै पहेलियों र रहस्यहरुलाई समाधान गर्न मद्दत गर्छ। Narnia वरिपरि जानुहोस्, पालन र यसलाई के गर्न वस्तुहरू र फर्नीचर छुनुहोस्। आफ्नो पहिलो संकेत तपाईं स्क्रिनमा देख्नुहुनेछ एक कार्ड छ। तपाईँको माउस प्रयोग गर्नुहोस्।
आज राती जोश बैल लागि एक ठूलो रात छ। उहाँले अर्किड होटल मा महान् बल समयमा आफ्नो प्रेमिका गर्न प्रस्ताव मा योजना गर्नुपर्छ। तर पन्ध्र वर्ष पहिले उनको प्रेमी थियो जो प्रसारण रेनल्ड्स, मनमा अरू केही छ। तपाईं महान् यसलाई बनाउनेछ
लाश को रात
तपाईं सीधा नरक गएका छन् कार्य पूरा गर्न। आफ्नो हतियार गोली र प्राप्त लाश छुटकारा। अधिक तपाईं मार्न, तपाईं प्राप्त अधिक अंक। आफ्नो कमजोर बिन्दु टाउको छ सम्झना। बन्दूक Recharge आफ्नो माउस र स्पेस बार प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं लाश हजारौं द्वारा cornered हुनुहुन्छ। आफैलाई रक्षा र ती सबै हत्या गरेर विश्वको बचत गर्न प्रयास गर्नुहोस्!
यो तपाईं आफ्नो बाटो मा हो शारीरिक बाधा हटाउन हुनेछ गरेका गर्न तर धन तिर सिपाहीहरूले सुरु गर्न यो तोप प्रयोग गर्नुहोस्। सफल बल र दूरी गणना।
चालीस चोर सुन त्यागी
प्ले कार्ड वा नयाँ डिजाइन संग क्लासिक त्यागी। तपाईं आदेश र साइन अनुसार आफ्नो फरक समूहमा कार्ड लागि तयार कसरी चयन गर्नुहोस्। यो समय कुल त्यागी खेल्छन्।
उहाँले तपाईंलाई जीवित रहन र तिनीहरूलाई रोक्न प्राणीहरू तिर जोर आफ्नो गढ तरवार को निष्ठा जोगाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मद्दत भर पर्छौं गर्नुपर्छ त वाइकिंग योद्धा प्रेत प्राणीहरू आफ्नो महल गर्न चढाइ रोक्न पर्छ।
किम dotcom जेल ब्रेक
जिम आफ्नो घनिष्ठ भाइ छ तर उहाँले कुनै कारण संग कैदी जीवन बिताइरहेका थिए। तपाईं जेलमा उसलाई भेट्न थिए किन पागल विचार अचानक आफ्नो टाउको प्रहार: तपाईं जेलको उहाँलाई उद्धार गर्न चाहन्छु! यो गर्न, तपाईं पहिल्यै तयारी धेरै बनाउन आवश्यक,
राज्य2हतार
orcs, trolls, दुष्ट विजार्डहरू र अन्य फोहर fiends को hordes विरुद्ध आफ्नो संसारमा रक्षा; योद्धाहरू र आफ्नो को mages को एक शक्तिशाली शस्त्रागार साथ सशस्त्र!
मारियो मौरी रक्षा
यो मौरी एक ठूलो समूहमा मारियो बगैचा हुँदैछ बगैंचामा फूल आक्रमण गर्न tending। मारियो कुनै विकल्प छ तर एक बन्दूक संग एक मौरी मा आफूलाई परिवर्तन। मारियो बगैंचामा आक्रमण सबै मौरी तल गोली मद्दत गर्नुहोस्।
साना मानिस र तपाईं पोर्टल प्राप्त गर्न आफ्नो टाउको र्याप गर्नुपर्छ केही अवस्थामा फिर्ता आफ्नो घर गर्न पोर्टल मार्फत पठाउनुभएर यो चुनौती जीत प्राप्त गर्न र आफ्नो कार्य पूरा भएको छ दस्तक गर्न तार्किक तर्क प्रयोग गर्नुहोस्।